Mitsara yevanoda kufamba | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Maria Jose Roldan | 05/04/2021 19:54 | Mitsara
Paunofamba zvishoma, kuita kudaro kunogona kukuita kuti unzwe kusava nechokwadi uye kunyange kutya nekuti kunetsekana kuti zvese zvichafamba zvakanaka hakuregi iwe uve zvachose. Kana pachinzvimbo, iwe uchifamba zvakawanda, kutya ikoko kunonyangarika uye iwe unongoda kuenderera uchinakidzwa neruzivo rwega rwega. Tichazotaura newe nezve mitsara yeavo vanofarira kufamba.
Kunyangwe isu tichifanirawo kukuyambira, ari mitsara inozokubatsira iwe kuona kukosha kwekufamba muhupenyu. Famba uye ona nzvimbo nyowani. Sei izvozvo, inokubatsira kuti uone kukosha kwazvo pakukura kwako pachako.
Ona nzvimbo nyowani, kure nepedyo
Kuziva nyika nyowani, vanhu vatsva, vanhu vatsva ... izvi zvese zvinokutendera kuti unakirwe nehupenyu mukubwinya kwaro kose. Uye haufanire kuyambuka hafu yenyika kuti ufambe. Iwe unogona zvakare kuzviita munzvimbo dziri padyo, makona iwe ausingazive uye kuti pamusoro pawo, iwe uripedyo newe.
Nekuti pane dzimwe nguva patinofunga kuti kufamba kunoreva kutora ndege uye kuenda kure kuti uone zvivakwa zvinozivikanwa zvinoonekwa nemunhu wese ... Patinokanganwa kuti kufamba kuri nani zvakare kuziva zviri padyo, kunakidzwa nezvishamiso izvo Hatizive kuti isu tine nhanho, nekuda kwekushushikana kwemazuva ese.
Ehezve, kuziva nzvimbo dziri kure zvakare sarudzo yakanaka iyo inokutendera iwe kunakidzwa nehupenyu nezvose zvayinogona kupa. Dzese nzvimbo dziri kure uye padyo nenzvimbo, iwe unongofanirwa kufunga nezvenzvimbo uye sarudza kushanyira iyo.
Munguva yekushanya kwako, usazeze kusvika pakuziva vanhu vayo, gastronomy yayo, makona anozivikanwa kwazvo uye akasarudzika ... zvese zvakanaka sarudzo. Rangarira kuti chengetedzo yako yakakosha, uye kuti haufanire kuipotsa pese paunoshanya.
Mitsara iyo kana uchida kuenda unofarira
Nechikonzero ichocho, pazasi, isu tiri kuzoratidza mamwe mitsara iwe yauchada, izvo zvinokuita kuti unzwe zvakanaka kunyangwe iwe uchida kufamba sekunge iwe uchida kurudziro yekuzviita. Usazeze kunyora pasi zvirevo zvaunofarira zvakanyanya kana zvinonyanya kukwezva. Nenzira iyi, Pese paunoda kufamba kana kunzwa kusahadzika nezvekuzviita, unogona kuvaverenga.
Uye kana izvo zvaunoda zviri kufamba uye pasina chinhu munyika chinokumisa, saka chiverengewo zvakare nekuti nenzira iyi iwe unonzwa kuti hakuna kukwana nyika iwe, nekuti iwe uchazoda kushanyira zvese!
Usarase ruzivo ...
"Kufamba chiitwa chine mhedzisiro inouraya nekusarura, kusashivirira uye kufunga kwakamanikana." - Maka Twain
"Ukangorumwa netsikidzi yekufamba hapana mushonga unozivikanwa, uye ndinoziva kuti ndingatapukirwa ndichifara kusvika mazuva angu apera." -Michael Palin
"Nzendo dzese dzine kwadzinoenda kunzvimbo dzakavanzika idzo mufambi asina chaanoziva." - Martin Buber
"Magumo edu haambove nzvimbo, asi nzira nyowani yekuona zvinhu." - Henry Miller
“Makumi maviri emakore kubva zvino uchanyadziswa nezvinhu zvausina kuita pane zvawakaita. Saka sunungura moorings uye nechikepe kubva kune anozivikanwa madoko. Tora mukana wemhepo dzekutengesa mumaseiri ako. Ongorora. Zvinonzwika. Tsvaga ". - Maka Twain
“Kufamba hutsinye. Izvo zvinokumanikidza kuti uvimbe vausingazive uye wotadza kuona zvese zvinozivikanwa uye zvakagadzikana nezve shamwari dzako neimba yako. Iwe uri kunze kwechiyero nguva dzese. Hapana chinhu chako kunze kwekukosha zvakanyanya: mhepo, maawa ekuzorora, zviroto, gungwa, denga; zvinhu zvese izvo zvinotarisana nekusingaperi kana kune izvo zvatinofungidzira zvakadaro ”. - Cesare Pavese
“Ini zvangu, handifambi kuenda kune imwe nzvimbo, asi kuenda. Ndinofamba nekuda kwekunakidzwa kwekufamba. Mubvunzo ndewokufamba ”. - Robert Louis Stevenson
“Hupenyu ndizvo zvatinozviita. Nzendo ndidzo vafambi. Zvatinoona hazvisi izvo zvatinoona, asi zvatiri ”. - Fernando Pessoa
"Zvinogara zvisingaite ... kusvika zvapera." - Nelson Mandela
"Vanhu vanoenda kunzvimbo dziri kure kuti vanoona, kunakidzwa, nemhando yevanhu vavanokanganwa pavanenge vari kumba." - Dagobert D. Runes
"Ndasvika pamhedziso yekuti nzira yechokwadi yekuziva kana vamwe vanhu vanokuda kana kuvenga ndeyekufamba navo" - Maka Twain
“Paunenge wafamba, rwendo harumbopera, asi rwunodzokororwa kasingaperi kubva pakuratidzwa nezviyeuchidzo. Pfungwa haigoni kuzvibvisa parwendo. - Pat Conroy
"Tinofamba, vamwe nekusingaperi, tichitsvaga dzimwe nyika, humwe hupenyu, mimwe mweya." - Anais Nin
“Hakuna nyika dzinoshamisa. Ani naani anofamba ndiye chete mutorwa ”. - Robert Louis Stevenson
“Pamwe kufamba hakuna kukwana kudzivirira kusawirirana, asi kana iwe ukakwanisa kutiratidza kuti vanhu vese vanochema, vanoseka, vanodya, vanonetseka uye vanofa, ipapo unogona kuunza pfungwa yekuti kana isu tichiedza kunzwisisana, tinogona kana kuita shamwari ". - Maya Angelou
"Unogona kuita chero chinhu asi haugone kuita zvese." - David Allen
“Kana iwe uchifunga kuti kushanya kune njodzi, edza maitiro. Zvinouraya. ”. - Pablo Coelho
"Kufamba kunoshandira kugadzirisa fungidziro kuti ive yechokwadi, uye kuona zvinhu sezvazviri pane kufunga kuti zvichave sei." - Samuel Johnson
“Mufambi wechokwadi anowana kufinhwa pane kunakidza pane kunetsa. Icho chiratidzo cherusununguko rwavo - rusununguko rwavo rwakawandisa. Iye anogamuchira kusurukirwa kwake, kana zvasvika, kwete senge kungoita zvehungwaru asi anenge nemufaro ". - Aldous Huxley
"Hapana anoziva kuti zvakanaka sei kufamba kusvika vadzoka kumba ndokuzorora pamutsamiro wavo wekare. - Lin Yutang
"Mufambi akanaka haana hurongwa hwakagadzwa uye haadi kusvika" - Lao Tzu
“Nzendo dzese dzine zvadzinobatsira. Kana iye mufambi achishanyira nyika dziri mune zviri nani mamiriro, anogona kudzidza maitiro ekuvandudza ake ega. Uye kana rombo rakanaka rikamutora kumuendesa kunzvimbo dzakaipisisa, pamwe anozodzidza kunakidzwa nezvaainazvo kumba. " - Samuel Johnson
“Kufamba, kurara, kudonha kukoka katatu kuchinhu chimwe chete. Nzira nhatu dzekuenda kunzvimbo dzatisinganzwisise nguva dzose ”. - Angeles Mastretta
“Tiri kurarama munyika inoshamisa izere nerunako, runako uye nerunako. Hapana muganhu kune zviitiko zvatingave nazvo chero tikazvitsvaga nemeso edu akasvinura ”. - Jawaharial Nehru
Chokwadi unotsunga kufamba zvishoma!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvibatsiro zvekuzvibatsira » Resources » Mitsara » Mitsara kune avo vanoda kufamba